सन्दिप आवद्ध प्याट्रियोट्स सीपीएलको सेमिफाइनल, आजको खेलमा रोमाञ्चक जित ! – Everest Dainik – News from Nepal
सन्दिप आवद्ध प्याट्रियोट्स सीपीएलको सेमिफाइनल, आजको खेलमा रोमाञ्चक जित !
काठमाडौं, भादै २८ । नेपाली लेग स्पिनर सन्दिप लामिछाने आवद्ध टिम वेष्टइन्डिजमा जारी क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) को सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । आज बिहानको भएको खेलमा जमैका तल्लवाजलाई २ विकेटले पराजित गर्दै गर्दै सन्दिप आवद्ध सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रियोट्स सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो । अहिले सीपीएलमा सन्दिप लामिछाने भने छैनन् । उनी एसिया कप छनौटका लागि मलेसिया गएकाले सीपीएल खेल्न छुटाएका हुन् ।
टस जितेर फिल्डीङ गर्ने निधो गरेको सन्दिपको टिमले १९२ रनको लक्ष्य पाएको थियो । उक्त लक्ष्य प्याट्रियोट्सले ८ विकेटको क्षतीमा भेटायो । उसका लागि एपी डेभिसले ५०, क्रीश गेलले २६, एफए अलेनले २३, ब्रेन्डन किङले २१ रनको योगदान दिए । जमैकाका लागि इन्डरबीर सोधी र थोमसले समान ३-३ विकेट लिए । भने, थोमसले २ विकेट लिन सफल भए ।
यसअघि टस हारेर फिल्डीङको निम्तो पाएको जमैकाले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १९२ रन बनाएको थियो । सो विशाल स्कोर बनाउनमा ग्लेन फिलीप्सले शतक प्रहार गरे । उनले ६३ बलमा १०३ रन बनाए । यस्तै, टेलरले ३३ रन बनाउँदा अन्य ब्याट्सम्यानको भने राम्रो प्रदर्शन रहन सकेन । सन्दिप आवद्ध टिम अब फाइनल प्रवेशका लागि आइतबार नाइट राइर्डससँग खेल्ने छ ।
ट्याग्स: CPL, sandeep lamichhane, क्यारेबियन प्रिमियर लिग